ရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများ | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများ
Updated: 2016-06-20 17:01
နိနဲ ဇက ၊ စန်း နဲ ဇက
နိနဲဇက နဲ့ စန်း နဲ ဇက ဟာ ကျောက်တုန်း လေး တွေ ခင်း ထား တဲ့လမ်း လေး နဲ့ ကျိုတိုမြို့ ရဲ့ ရိုး ရာ အလှ ကို ခံ စား နိုင် တဲ့ နေရာလေး တစ် ခု ပဲ ဖြစ် ပါတယ်။ လက် ရှိမှာ အရောင်းဆိုင် အတော် အများ ရှိပြီး ၊ လမ်း...
Updated: 2016-04-18 16:21
အိုး ထည် တို့ ရဲ့ မြို့ တော် အာရီ တာ ၊ ဂျပန် နိုင် ငံ ရဲ့ အိုးဖုတ် ခြင်း နဲ့ ထွန်း ကား ခဲ့ ပြီး နှစ် ၄၀၀ ကျော်သမိုင်း ရှိတဲ့ မြို့ ပဲ ဖြစ် ပါ တယ်။ အာရီတာ ရာခိ ဆိုတာ ကတော့ အာရီ တာ မြို့ ကို ဗဟို ပြုြ...
ရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများစက်ရုံ နှင့် အသုံးအဆောင်စက်ရုံများ လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း
Updated: 2016-03-30 13:25
အိရှင်း ဖုရုစတို ကန် ( မဲဂျိ ပြန် လည် ထူထောင်ရေး ပြတိုက် )
ကိုးစုဂိဂ၀ ခိ ဟန်း မှာ ရှိတဲ့ အိရှင်း ဖုရုစတို ပြတိုက် ဟာ ၊အဲဒို ခောတ် အပြီး မှာ မဲဂျိ ခောတ် အစ ပိုင်း မှာ တည် ထောင် ခဲ့ ပြီး ဦး အိုးခုဘို ရဲ့ မွေး ရပ် မြေလဲ ဖြစ် ပါ တယ်။...
Updated: 2016-03-04 14:05
အရီတ ကြွေ ထည် ဥယဉ် နှင့် ကြွေ ထည် လုပ် ငန်း
၁၇ရာ စုနှစ် အထက် ဥရောပ ဘုရင် တို့ ကိုတောင် ဆွဲ ဆောင် မှု ပေး ခဲ့ ပါ တယ် ။ နိုင် ငံ တကာ မှာ ရှိ တဲ့ ကြွေ ထည် လက် ရာတွေကို တောင် သူ့ အရိပ် တွေ ကိုေ ပး ခဲ့ တဲ့ အရီတ ကြွေ ထည် ရွာ ကလေး ဖြစ် ပါတယ်။ နောက်...
Updated: 2016-03-04 13:43
စစွတ်မ ရှု ဇိုး ( မဲ ဂျိ ခုရာ)
နှစ် တစ် ရာကျော် တောက် လျောက် အသုံး ပြုလာ တဲ့ အိုး ကြီး နဲ့ ယခု လဲ ပဲ ရှောချူး ချက် အရက် ကို ချက် လုပ် နေပြီးတော့ ၊ ချက် ပြုတ် ရန် ပြင် ဆင် ပုံ တို့ ကို မျက် မြင် ကိုယ် တွေ့ လေ့ လာ နိုင် ပါ တယ်။စမ်းသပ...
ရိုးရာစက်မှုလုပ်ငန်းများစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများစက်ရုံ နှင့် အသုံးအဆောင်စက်ရုံများ လေ့လာကြည့်ရှုခြင်း
Updated: 2015-06-02 15:35
ဟကတရဲ့ရိုးရာလက်မှုပစ္စည်းများကိုကိုယ်စားပြုနေသောနေရာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ဖုခုအိုကမြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပြသနေပါတယ်။ ရဲတိုက်မှုး ခုရိုဒကစတင်ဝင်ချိန် ဖုခုအိုကရဲတိုက်တည်ဆောက်ချိန်တွင် ခ၀ရနှင့် မိဆခိအရုပ်မ...
Updated: 2015-06-02 15:06
ဖုခုအိုကကို ကိုယ်စားပြုနေတဲ့ လက်မှုအနုပညာများ၊ နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှုများကိုပြသထားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရင်ခေတ်ကာလက ဘခုဖုကိုဆက်သရန်အတွက်ပြုလုပ်ရာမှ ဟကတရဲ့အိုဘီ (ကီမိုနိုတွင်ချည်သောကြိုး)အဖြစ်နာမည...